The Word Foundation, Inc. dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra nalahatra tao amin'ny fanjakan'ny New York tamin'ny 22 Mey 1950. Io no hany fikambanana nisy izay naorin'Andriamatoa Percival ho an'ireo tanjona ireo. Ny fototra dia tsy mifandray na mifandray amin'ny fikambanana hafa, ary tsy manohana na manohana olona, ​​mpitari-dalana, mpanoro hevitra, mpampianatra na vondrona izay milaza fa nahazo aingam-panahy, voatendry na nahazo lalana hafa hanazava ny asa soratr'i Percival.
Araka ny lalànantsika, ny fototra dia mety manana mpikambana tsy voafetra izay misafidy ny hanome azy ireo ny fanohanany ary handray soa amin'ny serivisy omeny. Avy amin'ireto laharana ireto dia voafidy ireo mpiambina manana talenta manokana sy sehatry ny fahaiza-manao izay mifidy ny filankevi-pitantanana izay tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ankapobeny sy ny fibaikoana ny raharahan'ny orinasa. Mipetraka amin'ny toerana samihafa any Etazonia sy any ivelany ireo mpitantana sy mpitantana. Miara-miasa amin'ny fivoriana isan-taona sy ny fifandraisana mitohy mandritra ny taona izahay hanatanterahana ny tanjonay niarahanay - hametraka mora foana ny asa soratr'i Percival ary hanampy ireo mpianatra mpiara-miasa amintsika izay mifanerasera aminay avy amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao hiresaka ny fianarany sy ny fanamby atrehin'ny olombelona amin'ny fanirian'izy ireo hahatakatra an'ity fiainana eto an-tany ity. Manoloana io fikatsahana ny Fahamarinana io, Fisainana sy faniriana dia tsy voadio amin'ny resaka habaka, halaliny ary halaliny.
Ary noho izany, ny fanoloran-tenantsika sy ny fitantananay dia ny hampahafantatra amin'ny olona an'izao tontolo izao ny atiny sy ny dikan'ilay boky Fisainana sy faniriana ary koa ireo boky hafa nosoratan'i Harold W. Percival. Hatramin'ny 1950, ny Word Foundation dia namoaka sy nizara ireo boky Percival ary nanampy ny mpamaky tamin'ny fahatakaran'izy ireo ny asa soratr'i Percival. Manome boky ho an'ireo voafonja sy tranomboky. Manolotra boky misy fihenam-bidy ihany koa izahay rehefa zaraina amin'ny hafa izy ireo. Amin'ny alàlan'ny programa ho an'ny Mpianatra ho an'ny Mpianatra dia manampy amin'ny fanamorana làlana ho an'ireo mpikambana izahay izay te hiara-handalina ny sangan'i Percival.
Ny "Hafatra" dia ny lahatsoratra voalohany nosoratan'i Harold W. Percival ho an'ny gazetim-panjakany malaza, The Teny. Namorona kinova famoahana fohy kokoa ho pejy voalohany amin'ny magazine izy. Ny etsy ambony is famerenana ity fohy kokoa ity version from ny boky voalohany amin'ny volavolan-dahatsoratra dimy amby roapolo voafetra, 1904 - 1917. Ny famoahana dia azo vakiana amin'ny manontolo amin'ny Pejy Editorials.